October 2019 - Page5of6- Myanmar Fire Services Department
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီးကျေးရွာနေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
admin | Oct 3, 2019 | မီးလောင်မှုသတင်း, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၂ . ၁၀ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၊(၀၄ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ အနောက်မြောက်ဘက်(၁၂)မိုင်ခန့်အကွာ၊ ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီးကျေးရွာနေ ပိုင်ရှင် ဦးခင်မောင်ဝင်းသည် နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း အမှိုက်များ မီးရှို့ရာမှ အနီးရှိ (၄၃ x ၃၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊...
၅ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးရှေ့တွင် စိန်ပန်း� ....
admin | Oct 2, 2019 | ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၁.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၉ ၄၅) အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်း၊ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးရှေ့ လမ်းမပေါ်သို့ စိန်ပန်းပင်လဲကျမှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၉ ၅၀)အချိန် သတင်း ရရှိသဖြင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ဘော်ဗဒါန်းကျေးရွာရှိ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်တွင် တွင်းအလုပ်သမားမ� ....
၁.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၅ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ဘော်ဗဒါန်းကျေးရွာရှိ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက် အမှတ်(၅)တွင် တွင်းအလုပ်သမားများ အောက်စီဂျင်ပြတ်၍ ပိတ်မိနေ ကြောင်း (၁၅ ၃၂)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့် မိုးကုတ်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ စောရန်ပိုင်(အနောက်)ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းဘေး၊ မိုးကောင်းလျှပ်စစ်အရာရှိဝန်းရှ� ....
admin | Oct 2, 2019 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၁.၁၀.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၀၈ ၅၅)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်း‌ဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ စောရန်ပိုင်(အနောက်) ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းဘေး၊ မိုးကောင်းလျှပ်စစ်အရာရှိဝန်း၊ အိမ်အမှတ်(ခ/၁)နေ အိမ်ရှင် ဦးကျော်ဇေယျ၏ (၄၀x၆၀)ပေခြံဝင်းအတွင်းရှိ လဲကျနေသော သက်ရင်းကြီးပင်သစ်ခေါင်းအတွင်း...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ (၆၂)လမ်းနှင့် မက္ခရာလမ်းဒေါင့်တွင် ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း
၃၀.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၂၃ ၃၂) အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ (ဈ)ရပ်ကွက်၊ (၆၂)လမ်းနှင့် မက္ခရာလမ်းဒေါင့်တွင် ပြည်ကြီးတံခွန်မှ မူဆယ်သို့ ယာဉ်မောင်း ဦးအောင်လှ မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ်(3N/8264) FUSO အမျိုးအစား(၁၂)ဘီးယာဉ်သည် လမ်း၏ယာဘက်တွင်ရပ်ထားသော...
Page5of 6« « Previous...23456Next »